fitokisana Archives - Pejy 3 amin'ny 3 - Countdown to the Kingdom
Pedro Regis - Aza miala amin'ny vavaka
Rehefa tsy eo ianao dia lasa lasibatry ny Devoly.
Angela - Mila vavaka ianao
Aza mino fa afaka mamaha ny olanao irery ianao.
Simona - Omeo an'i Jesosy ny zava-drehetra
Tsy hitaredretra izy fa hampionona anao.
Simona - Reny na famindram-po
Jesosy dia miandry amin'ny sandry misokatra.
Pedro Regis - Ny marina sy ny lainga
Mahareta mankany amin'ny fandresena lehibe.
Fr. Scanlan - Faminaniana ny taona 1976
Pedro Regis - Mijanona eo amin'ilay làlana
Ho avy ny andro izay maro no handà ny finoana noho ny tahotra.
Pedro Regis - Aza mihemotra
Ho hita hatraiza hatraiza ny aretina…
Pedro Regis - Matokia ny herin 'Andriamanitra
Ny fandresenao dia ho avy amin'ny herin'ny vavaka.